Roscón de Reyes yakagadzirwa nekeke resiponji - Thermomix Recipes | ThermoRecipes
Kudya100 maminitsi8 vanhu340 makarori
Kana iwe usingade yechinyakare Roscón de Reyes mukanyiwa, heino vhezheni yauchazoda. Takagadzira marosikone anosetsa akagadzirwa nekeke rine muto nemaarumondi akakuyiwa.
Ndiyo imwezve dhizeti kuti ugone kushandira iyi zororo pasina matambudziko, chinhu chakanyanya kugadzirirwa kumba uye chetsika. Iwe haugone kupotsa michero yakabikwa, maarumondi uye glaze kuti iite juicier yakawanda.
Kana uchida kuita makeke Iyi inzira yakavimbiswa yekukwanisa kuzviita nenzira iri nyore kwazvo. Kuti ugone kuiona nhanho nhanho iwe unogona kuona yedu yekuratidzira vhidhiyo.
1 Roscón de Reyes yakagadzirwa nekeke resiponji
A Roscón de Reyes yeKisimusi ino yakagadzirwa nekeke resiponji uye nekushongedzwa kuri nyore kwemichero yepipi, glaze inotapira uye mamwe maarumondi akachekwa.
Nguva yekugadzirira: 1H
Nguva yakazara: 1:40 p.m.
100 g yeupfu hwegorosi
125 g yemaamondi akachekwa
1 sacheti yembiriso yakaoma kana 15 g
150 g bhotela, yakanyoroveswa kana yepakati yakanyungudutswa
3 mazai L
Zest yeorenji diki
Muto weorenji diki
A 125 g yoga yoga
150 g shuga yechando
1 tablespoon Philadelphia type cream cheese
3 tablespoons mukaka wose
Candied tsvuku uye girini michero
Tsama yemaamanda akakungurutswa
Chitsama cheshuga yakakora
Tinopisa ovheni kusvika 180 °. Mugirazi yedu yeThermomix tinowedzera 125 g yebhotela yakanyunguduka, 160 g yeshuga uye zest yemononi uye orange. Tinozvironga panguva Masekonzi mashanu pakumhanya 15.
Isu tinoenderera mberi nekuwedzera mazai matatu, muto weorenji diki, 3 g yeyoga yega yega uye tinoronga zvakare. Masekonzi mashanu pakumhanya 15.
Pakupedzisira tinowedzera 125 g yeamondi yeupfu, 100 g yeupfu hwegorosi uye 15 g yehupfu hwebibiki. Isu tinozvisanganisa nekugadzira panguva Mineti imwe pakukanya kumhanya.
Tinoisa muchoto pahupamhi hwepakati, nekupisa uye pasi. Tinorega ichibika pakati pemaminitsi gumi nemashanu nemaminitsi makumi maviri kana iri mold duku. Mune ino resipi, maviri madiki madiki 15 cm madhayamita mold akazadzwa.
Tinochenesa girasi uye tinowedzera 150 g yehuga yehuga, chipunu chekisi cream uye 3 tablespoons emukaka wose. Tinozvironga panguva Masekonzi mashanu pakumhanya 10.
Patinenge tabika keke, tinorega kuti itonhore uye tinoisunungura. Isu tinodurura glaze pamusoro uye toisa maarumondi akachekwa uye michero ine candied. Tinogonawo kuwedzera shuga yakaoma.
Iwe unogona kuzadza iyi roscón nekamu cream, ichave inoshamisa!
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Desserts, Keke
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » Thermomix mapepa » Desserts » Roscón de Reyes yakagadzirwa nekeke resiponji